Maamulka Jubbaland oo ka niyad jabsan R/ Wasaaraha la filayo in dhawaan uu ku dhawaaqo Madaxweynaha Somalia - iftineducation.com
Maamulka Jubbaland oo ka niyad jabsan R/ Wasaaraha la filayo in dhawaan uu ku dhawaaqo Madaxweynaha Somalia
iftineducation.com – Wararka ka imaanaya Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in magaaladaasi shalay iyo maanta laga dareemayo xaalad ka duwan tii ay ku jiray labadii maalin ee lasoo dhaafay.
Magaalada Kismaayo maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku baahay hadal heynta ku aadan in Ra’izul Wasaaraha Soomaaliya loo magacaabayo Sii haya Xilka Wasaarada Maaliyada Xuseen Cabdi Xalane , oo kasoo jeeda Beesha Ogaadeen .
Maalin kahor Magaalada Kismaayo waxaa ka dhacay Dabaaldagyo waa weyn ay ka qeyb qaadanyeen Ciidamada Maamulka Jubba kuwaa oo rasaas badan cirka u ridayay, waxaana Dabaaldagyadaasi ka dambeeyeen markii war been abuur ah oo la xariiray in Xuseen Cabdi Xalane loo Magacaabay R/Wasaare uu gaaray Magaaladaasi.
Maamulka Jubba uu Hogaamiyo Sheekh Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa dadaal badan ku bixiyay sidii Xuseen Cabdi Xalane looga dhigi lahaa R/Wasaare, waxaana Wararka laga helayo madaxtooyada Maamulka Jubba sheegayaan in laga yaabo in maamulkaasi uu ka fiirsado la shaqeynta Dowlada hadii uu waayo Xilka R/Wasaaraha ninka ay la doonayaan.
Markii si weyn uu usoo shaac baxay in Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke loo magacaabayo R/Wasaaraha soomaaliya, waxaa xaalad niyad jab ah laga soo sheegayaa Masuuliyiinta Maamulka Jubba iyo shacabka ku dhaqan Magaalada Kismaayo iyo Magaalooyin kale oo katirsan Gobolada Jubooyinka.
Beesha Ogaadeen ayaan wali nasiib u yeelan in ay helaan Xilka Ra’izul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya, waxaana mudooyinkii dabe xilkaasi ku loolamayay Siyaasiyiinta kasoo jeeda Beelaha Mareexaan iyo Majeerteen.